Aniga ( oo ah gabar, 16 jir ah) waxaan ku socdaa kursiga curyaamiinta.Weligay ma yeelan wiil saaxiib ila ah.Saaxiibaday kuma socdaan kuraasta curyaamiinta.Dhammaan saaxiibaday waxay soo yeesheen wiilal saaxiibo la ah.Tani miyay sabab u tahay in wiilashu aysan u maleyn in aan qurxoonahay? – Tips for refugees
Previous Previous post: Anigu waxaan ahay wiil 15-sanno-jir ah. Waayihii hore nin ayaa si xun ii dhaawacay. Wuxuu iga qabtay lugahayga dhexdooda. Anigu ma doonaynin in uu sidaasi ugu sameeyo. Inta baddan weli waan ka fikiraa. Hadda anigu waxaan leeyahay gabar saaxiibtayda ah. Sideen arintaasi ugala hadli karaa?
Next Next post: Aniga (oo ah wiil 17 jir ah) waxaan leeyahay saaxiibad.Waxaa ay hadda u tagtey gynecologist, oo ah takhtaradda dumarka.Takhtaradda waxay sheegtay in gabdhaha oo dhami ay halkaasi tagaan.Sidoo kale ma jiraa takhtarka ragga?